Posted by အင်ကြင်းသန့် at 3:20 PM
ညီမလေးရေ.... ဘာတွေဖြစ်..။ ဘယ်အရာမဆို အချိန်က ကုစားသွားပါလိမ့်မယ်။ အနာသိရင်တော့ ဆေးရှိမှာပေ့ါ။ ကဗျာလေးက ခံစားပြီး ရေးထားသလိုပဲ။
အင်းး တကယ်ခံစားနေရတာလား မအင်ကြင်း။ ကဗျာဖတ်ပြီး ကျွန်တော်တောင် ငိုင်သွားတယ်။
စကားမစပ်ဗျာ.။ စာလုံးပေါင်းမှားနေတာလေး ပြင်လိုက်ပါဦး "၀ဍ်" ဆိ်ုပြီးဖြစ်နေတယ်။ "၀ဋ်" ဖြစ်ရမှာလေ။ ဖီးလ်တွေ တက်တာများသွားပြီထင်တယ်။
@ကိုမိုး>>> အာဘာဘာာဘာဘာာာာာာာ.....ရှက်လိုက်တာအစ်ကို့ရာ ချက်ချင်းပြင်လိုက်ပြီနော် ဟီးးးးးးးးးးးးး
အင်ကြင်းရေ ငါကတော့ နင့် ကဗျာတွေ ကို ကြိုက်တယ်...
အလွမ်းကင်ဆာက ဖြေဆေးမရှိပေမယ့် မသေနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ်ဆိုးတယ် အဲဒါ သေချင်ရက်နဲ့ မသေနိုင်တဲ့ ကင်ဆာပေါ့။
After reading your poem, I felt sorry for you. Because I know that's your own feeling. isn't you? And then, I also deeply remember somebody (hee hee). But you'll be meet and enjoy with next one. ( coz of "Simple Answer part-2 :) ). I think, if he see Ingjin flowers or plants, he'll miss you too. I can tell him on behalf of u, "U CAN RUN, U CAN HIDE BUT U CAN'T ESCAPE MY LOVE". (ha ha)
ပျောက်အောင် နှစ်တစ်ထောင် ရေခဲတောင်ကြာပွင့်သာရှာကြံမှီဝဲပေတော့...း)
ကဗျာလေး ဖတ်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ
ညီမ က ကဗျာစပ်တာလည်း ကောင်းတာဘဲ
အလွမ်းတွေ များနေတာတော့ သနားတယ်
ဒါဆို အဆိပ်ပြောင်းပြန်ကုထုံးနဲ့ ဒီကင်ဆာ အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယခင်ဗျား.........
ဟုတ်တယ်ဗျာ မှန်တဲ့ စကားလုံးတွေပါပဲ
ထပ်တူ ခံစားသွားရတယ်...။ အရမ်းဆိုးဝါးတဲ့ဝေဒနာ တခုဆိုတာ ခံစားချက်တူတဲ့ သူတိုင်း ခံစားတတ်မှာပါ။
၀ဋ်ကြွေးတွေ မြန်မြန် ကျေချင်ပါပြီ......
ကဗျာလေးက တစ်ခုခုကို ခံစားနေရတဲ့ ရသလေးတစ်ခုနော်..
အလွမ်းဆိုတာ ကင်ဆာတဲ့လား... ဟုတ်ပ သေတဲ့ အထိ ပါသွားတာလေ....
အမယ်ငီး..... ပြောရတာ လျှာယားလိုက်တာ ပြောနေမကျတော့ ခွီးးးးး
ကျေပါတယ် မအေးစိန်ရယ်.. ( ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း လေသံဖြင့် အော်လိုက်သည် ) ။။
အလွမ်းကင်ဆာ ဆိုတာ ဘယ်နေရာမှာ ပေါက်တာလဲ .. လို့..အသည်းထဲမှာလား .. နှလုံးထဲမှာလား .. ဦးနှောက်ထဲမှာလား ။
ကုရမဲ့ဆေးမတူလို့ လေ .. ဟဲဟဲ ..
လပျံ ၃ စီးစာ ပို့ပေးမလို့ပါ ..အလွမ်းကင်စရာပျောက်ဆေးးးး )
ကဗျာတွေ ဘာတွေ စပ်တတ်တယ် ..သင်ပေးပါအုံး မမကြီးကို ..း))
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်ရည်ကင်ဆာ မဖြစ်တာပဲ တော်သေးတယ် မှတ်ပါ..။
တခုတော့ ကြိုပြောမယ်နော် ကျနော်နဲ့ တွေ့လို့ကတော့ မဟုတ်ကဟုတ်က စကားတော့ ဖတ်ရမှာနော်.. စိတ်မဆိုးနဲ့သိလား ခင်လို့နောက်တာလို့မှတ်ပါ...။
@ဒဏ္ဍာရီ>>>ဟုတ်တယ်မမရေ...အချိန်က အကောင်းဆုံးသမားတော်ပါပဲ...အမာရွတ် ကျန်ခဲ့တာကလွဲလို့ပေါ့လေ...
@wai soe>>>သယ်ရင်း..... ဘော်ဘော်အရင်းဂျီးဒွေနော်... မကြိုက်ဘူးလို့ပြောရဲပြောကြည့်ပါလား.....:D
@မရွှေစင်ရဲ့ညီမလေး>>>ကဗျာစပ်တာဆိုတော့ အတိသယ၀ုတ္တိအလင်္ကာကို သုံးလိုက်တာလေ...:)
@chit su>>> honey, sorry to make you feel because of my poem, thank you so much, u always understand my feelings...
@ကိုဏီး>>> ကိုဏီး...နှစ်တစ်ထောင်ရေခဲတောင်ကြာပွင့်တည်နေရာသိရင် ပြောပြပါဆို...
@မမရွှေစင်>>> မမရွှေစင်က သနားတယ်ဆိုတော့ ငိုချင်ရက်လက်တို့ ဖြစ်သွားပြန်ပြီ...ဟင့် :(
@ကိုသော်ဇင်စိုး>>>ကိုသော်ဇင်စိုးရေ...ကိုသော်ဇင်စိုး အကြံပေးတဲ့ အတိုင်းပဲ အလွမ်းတွေကိုပဲ ဖြေဆေးအဖြစ်သောက်လိုက်တော့တယ်နော်...
@သဒ္ဓါလှုိင်း>>>သဒ္ဓါရေ...ခံစားချက်တွေတူတယ်ဆိုလို့ သဒ္ဓါလည်း ၀ဋ်ကြွေးတွေ မြန်မြန်ကျေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...
@မြတ်မွန်>>>မြတ်မွန်ရေ...တစ်ခုခုမကဘူး ခံစားနေရတာက :))
@မနန်း>>>မနန်းရေ...နာမည် အပေးကောင်းလို့ သဘောကျသွားပြီလား...
@လုံလုံ>>>လုံလုံရေ...မအားတဲ့ကြားထဲကနေ မမကဗျာလေးကို အပြေးအလွှား လာဖတ်ပေးသွားလို့ ကျေးဇူးပါကွယ်..
@မမခြင်လေး>>>မမခြင်လေး...ညလေးရဲ့ ကဗျာလေးကြောင့် မမခြင်လေး လျှာယားသွားတာဆိုတော့ ညလေး ကုတ်ပေးမယ်လေ (လက်သည်းတော့ ညှပ်ရသေးဘူးနော် ဟီးးးးးးးးးးးး )
@မမကိကိ>>>အလွမ်းကင်ဆာက တစ်ကိုယ်လုံးမှာပေါက်တာ မမ...ပို့ပေးလိုက်ပါ...အလွမ်းကင်စရာ ပျောက်ဆေး...လပျံ ၃စီးစာနဲ့ လောက်ပါ့မလား...ထိုင်ဝမ်ကို ကဗျာစပ်နည်း လာသင်ပေးမယ်...မျှော်နေပါ :))
@ကိုအိမ်>>>ရပါတယ် ကိုအိမ်...မဟုတ်လည်းက၊ ဟုတ်လည်းကနော်...ခင်လို့စတာ လုံးဝစိတ်မဆိုးတတ်ပါ...
မရေးတတ်ရေးတတ်နဲ့ရေးထားတဲ့ ကဗျာလေးကို လာပြီးအားပေးကြတဲ့ မောင်နှမတွေရဲ့ ကွန်မန့်လေးတွေကို အားတိုင်းပြန်ပြန်ဖတ်ရတာလဲ အမောပဲ :)) ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ် အကုန်လုံးကို....
အလွမ်းကင်ဆာဆိုတော့ အချစ်ဓာတ်ကင်ပေးမှပဲ သက်သာတော့မှာပေါ့...
လောလောဆယ် အနာသက်သာအောင် ဘလော့ဘိန်းဆေး ထိုးပေးထားလိုက်ပါ့မယ်...
စီပေါက်မရှိလို့ ဒီလိုပဲလာအော်နေရပါတယ် :)